रामदेवको गैर कानुनी टेलिभिजनः प्रधानमन्त्री देउवाले नै गरे उद्घाटन ! - Malayakhabar
होम पेज देश समाचार रामदेवको गैर कानुनी टेलिभिजनः प्रधानमन्त्री देउवाले नै गरे उद्घाटन !
रामदेवको गैर कानुनी टेलिभिजनः प्रधानमन्त्री देउवाले नै गरे उद्घाटन !
काठमाडौं := भारतीय योग गुरु रामदेवले नेपालमा गैर कानुनी टेलिभिजन सञ्चालनमा ल्याएका छन् । अचम्मको कुरा त विना स्वीकृति शुरु भएको यो टेलिभिजनको उद्घाटन स्वयं प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले गरेका छन् ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले सञ्चारमाध्यममा वैदेशिक लगानी वर्जित गरेको छ । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–८, मन्डिखाटारस्थित पतञ्जलि योगपीठको नेपालस्थित कार्यालयमै गएर विदेशी लगानीका स्याटेलाइट टेलिभिजन ‘आस्था नेपाल’ र ‘पतञ्जलि नेपाल’ उद्घाटन गरे ।
यो कार्यक्रममा अन्य दलका शीर्ष नेताहरु पनि सहभागी थिए । यो विषयमा चौतर्फी आलोचना शुरु भएको छ । स्वयं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की यस विषयमा औपचारीक प्रतिकृया दिनबाट पछि हटेका छन् । यी च्यानलले सञ्चालन अनुमति त के निवेदन समेत दर्ता गराएका छैनन् ।
अघिल्लो लेख मेस्सीको पहिलाे गोल, पीएसजीको जित।
पछिल्लो लेख गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचन डिसेम्बर दोस्रो साता।